पोखरामा पारस शाहसँग जहाँपनि एकसाथ देखिने यी युवती र बाबु को हुन् [पुराविवरणसहित] – Sandes Post
मुख्य पृष्ठ /News/पोखरामा पारस शाहसँग जहाँपनि एकसाथ देखिने यी युवती र बाबु को हुन् [पुराविवरणसहित]
कास्कि । धेरैलाई थाहा छ पूर्व युवराज पारस शाह अहिले पोखरामा छन् । लकडाउन अघि पोखरा पुगेका उनी अहिले त्यहाँ नै रमाएर बसेका छन् । उनी थुप्रै नेपालीको टिकटकमा छाइरहेका छन् । टिकटकमा आफु अब काठमाडौ नफर्किने पोखरामा नै बस्ने भन्ने गरेका छन् । यहाँहरुलाई पारस शाह भिजे तथा मोडल सोनिका रोकायासँग मुस्ताङ घुम्न गएको खबर भाइरल भएको थाहा नै छ । उनी मुस्ताङ हेलिकोप्टरमा उडेर गएको भिडियो आएको थियो । यति मात्र हैन उनीसँगै हेलिकोप्टरमा अर्की एक युवती थिइन् ।
साथमा एकजना बच्चापनि थिए । त्यसपछि पारस बेला–बेला उनै युवतीसँग पोखरा बजारमा बारम्बार देखिन्छन् । उनीसँगै एकजना सानो बाबुपनि देखिन्छन् । बाबुसँग पारस निक्कै झम्मिएको देखिन्छ । उनीहरुलाई आफ्नो बाइकमा लिएरपनि हिँडिरहेको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा पारससँगै देखिने उक्त युवती खुबै जम्ने गरेको भेटिएको छ । उनी टिकटकमापनि छिन् । बेला–बेला उनी पारस शाहको बा १९ प २९२ नम्बरको लक्जरी बाईकमापनि देखिन्छन् । सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा पारस शाहको बाइक चलाउँदै । बाईक चलाउँन सिक्दै भनेर लेख्छिन् । त्यहाँ पारसले बाइक थामेर सिकाइरहेको देखिन्छ ।
पोखरामा पारस शाह राहत वितरण गर्न पुग्छन् । त्यहाँ सँगै हात पक्रिएर कालो चस्मा लगाएर उनी देखिन्छिन् । मुस्ताङ जानु अघि पोखरामा उनै सोनिका रोकाय र पारससँग उनी एक होटलमा बसिरहेको देखिन्छन् । उनको सम्वोधन देख्दा पारससँग झुम्मिरहेका बालक उनै युवतीका छोरा हुन् भन्ने अनुमान गर्न कुनै गाह्रो हुन्न । ती बालकलाई पारस आफ्नो बाईमा राखेर घुमाइरहेका हुन्छन् । अनेक ठाउँमा उक्त बालकसँग पारस खेलिरहेकोपनि देखिन्छ । जहाँ जाँदापनि सँगै देखिने तर राजपरिवार सदस्य नभएकी ती युवती को हुन् त ? सायद सबैको चासो होला । यसैले हामीले खोजी गरेका छौ ।
टिकटमा उनी इएसएचए डट एजी युजरमा छिन् । उनका झण्डै १ लाख फलोअर्स छन् । १५ लाख भन्दा माथी भिडियो लाईक छ । फेसबुकमा तृष्णा अग्रवाल नाममा भेटिन्छिन् । उनले फेसबुकमा एउटा पोष्ट गरेकी छिन् । मैले पनि अहिलेको ट्रेण्ड अर्थात् बाजे बजई को अनुसारले थर लेख्यो भने मेरो रियल नाम थर यस्तो पो हुने रहेछ । तृष्णा शाहीठकुरी गिरी अग्रवाल । अब मेरो छोरी को बिहे पछी छोरीको कति लामो हुने हो ? यसले के देखाउँछ भने उनी शाही ठकुरीकी छोरी हुन् । अग्रवालसँग बिबाह गरेकी छिन् । उनका एक छोरी र एक छोरा छन् । यसले उनीहरुबीच पारिवारिक सम्बन्धपनि छ भन्न सकिन्छ ।
उनले फेसबुकमा नै दाजु बहिनीको माया भन्दै पूर्व युवराज पारस शाहसँग भाइटिका लगाएका तस्विर पोष्ट गरेकी छिन् । नेपाली टोपीमा सजिएर खिचिएको त्यो तस्विर भाईटिकापछि खिचिएको हो भन्ने सजिलै अनुमान लगाउँन सकिन्छ । यसैले उनीहरुको नाता सम्बन्ध दाजु बहिनीको छ भन्न सकिन्छ । भाईटिका लगाएको तस्विरमा उनले लेखेकी छिन् । दाजु बहिनीको सम्बन्ध रगतले मात्र तय गर्दैन । The bond betweenabrother and Sister is not decided by blood , It is enternally blessed ?? यहाँ के प्रष्ट हुन्छ भने पारसले यी युवतीसँग बहिनीको सम्बन्ध बनाएका छन् । पूर्व राज ज्ञानेन्द्रका छोरी एक जना मात्र हुन् । अर्थात पारस शाहकी बहिनी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाह हुन् । ३० डिसेम्बर २०१९ को पारस शाहको जन्मदिनमा उनै तृष्णाका साथमा पारस, छोरी पूर्णिका, अर्की छोरी र छोरा ह्दयन्द्र सहित पारिवारीक जमघटपनि देख्न सकिन्छ ।
त्यसैले उनले यी तृष्णासँग माईती चेलीको सम्बन्धपछि बनाएका छन् भन्ने देखिन्छ । किनकी माथी उल्लेख गरिएका बाबु अर्थात तृष्णाका छोराको भिडियोमा पारससँगै देखिएको पोष्टमा उनले मामा भान्जाको साइनोपनि लगाएकी छिन् । यसैले आजकाल पारससँगै पोखरामा देखिने युवती पारस शाहले बहिनी नाता बनाएकी तृष्णा अग्रवाल हुन् । उनी के गर्छिन् भन्ने खुल्न सकेको छैन ।
पारस शाहको हिमानीसँग कस्तो छ सम्बन्ध ?
ऐतिहासिक नेपालमा राजतन्त्रको पछिल्ला शासक अत्यन्तै विवादमा परे । राजतन्त्रको अन्त्य भएको घोषणापछिपनि उनीहरुका हर्कतका विवाद सँधै समाचार बनिरहे । राजतन्त्र अन्त्य हुनासाथ त्यही शासकका पूर्वयुवराज पारस शाह र पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाहको सम्बन्ध पनि करिब– करिब अन्त्य नै भएको अनुमान लगाइएको थियो । कारण, पारसको अतिरिक्त अफेयर र विदेश पलायन । साथै पारसको चालचलन र आँचरणका कारणपनि उनीबाट हिमानी टाढा नै रहिन् ।
पारसको कु लत र बिग्रिएको चरित्र कहिलै सुधार्न नसकेपछि उनीहरु एक्लै रमाउँन थाले । थाइल्यान्डकी प्रेमिका कन्निका चाइयर्सनसँगको सम्बन्धका कारणपनि हिमानी टाढा हुन बाध्य भएको पारिवारीक स्रोतको भनाई छ । पारिवारिक रूपमा उक्त विषयमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले जानकारी पाएपछि पारसका लागि निर्मलनिवासको ढोका बन्द भयो, जुन अहिलेसम्म खुलेको छैन भनेर बताइन्छ । यसैले पारस बाहिर–बाहिर नै एक्लै हिँडिरहेका छन् । पारसले उनलाई सँधैका लागि त मेरो छोराको रुपमा रहँन सक्दैनस् भनेर बचन लगाएपछि उनी अहिलेसम्म निर्मल निवास नटेको स्रोतको दावी छ ।
पारस लामो समय थाइल्यान्ड बसे, कन्निकासँगका अनेक अफेयरका विवरणहरू बाहिर आउन थाले । त्यहाँपनि प्रेमिकासँग उनको सम्बन्धमा केही खटपट आएका समाचार आइरहेका थिए, यता हिमानी भने सामाजिक कामका लागि हिमानी ट्रष्ट खोलेर बसेकी थिइन् । ‘कन्निकासँगको प्रेममा पारस उतै भुलिएपछि पारिवारिक रूपमा उनको सम्बन्ध हिमानीसँग राम्रो भएन, नेपालमै रहँदा पनि कतिपयसँगको विवादमा मुछिएपछि थाइल्यान्ड पलायन भएका थिए’, निर्मलनिवास स्रोतले भन्यो,‘ यसपछि पूर्वराजपरिवारले उनलाई त्यति ध्यान पनि राखेको थिएन ।’
उनीहरूको सम्बन्धमा कन्निकाको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप थियो भन्ने उदाहरण पनि सतहमा आयो । पारस नेपाल आएर थाइल्याण्ड नफर्किएपछि कन्निकाले सामाजिक सञ्जालमा एक बालकलाई प्रस्तुत गर्दै उनी पारसका छोरा भएका दाबी समेत गरिन् । यसले परिवारमा झन् खटपट बढायो । यतिमात्र होइन, पारस–हिमानीको सम्बन्धमा प्रत्यक्ष असर पार्नेगरी कन्निकाले हिमानीको तस्विर पोष्ट गर्दै सार्वजनिक रुपमै गालीगलौज गरेकी थिइन् । सामाजिक सञ्जालमा हिमानी, पारसप्रति आक्रोश पोख्ने गरेकी कन्निका पछि पारसलाई भेट्न नेपाल पनि आइन् ।
सतिशविक्रम शाहकी छोरी स्तूती शाहको विवाह पार्टीमा बबरमहलस्थित कार्की ब्यांक्वेटमा कन्निका सुरक्षागार्ड र छोरासहित पुगेकी थिइन् । स्रोतका अनुसार सो दिन कन्निका र पारसले पार्टीमा सहभागिता जनाइसकेपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र राति साढे ९ बजे मात्र पुगेका थिए, ज्ञानेन्द्र आउँदा कन्निका र पारस त्यहाँबाट हिडिसकेका थिए । पार्टी भने साँझ ६ बजेबाट सुरु भएको थियो । कन्निका र पारसलाई सँगै विवाह पार्टीमा देखेका केही शाही परिवारका सदस्यले फोटो खिच्न खोजे पनि कन्निकासँगै रहेका बाउन्सरहरुले रोक लगाएका थिए । यसले पारस–हिमानी सम्बन्ध अझ भद्रगोल अवस्थामा पुगिसकेको थियो ।
पारस विभिन्न अभियोगमा थाइल्यान्ड जेलमा परेका थिए । उनलाई छुटाउनका लागि हिमानी आफैं त्यहाँ पुगेकी थिइन् । यसपछि उनीहरूबीचको सम्बन्धमा केही सुधार आएको अनुमान गरिएको थियो । यो सम्बन्ध अझ नजिक भएको ठहरचाहिँ कन्निकासँग पारसको अफेयर टुटेपछि गरियो । अहिले पारस–कन्निकाको कुनै सम्बन्ध छैन, बरु हिमानीसँग नजिक भएको छ । पारसबाहेक पूर्वराजपरिवारको राजधानी बाहिरको भ्रमणका क्रममा छोराछोरी भेट्नका लागि पारस निर्मलनिवास छिर्न थालेपछि अझ सम्बन्ध बलियो हुन थालेको बताइयो । यसपछि पारिवारिक भोज, रात्री भोजमा पारस परिवारसँगै देखिन थाले ।
अझ, पारस–हिमानीको सम्बन्धको निकटता छोरा हृदयेन्द्रको ब्रतबन्धदेखि भएको निर्मलनिवास उच्च स्रोतले जनायो । यसपछि यो दम्पत्तीमा सम्बन्ध सुधारका अनेक उदाहरण देखा परे पनि हिमानीलाई माताले तत्काल पारसनजिक नहुनु भन्ने सुझाव दिएको खबर बाहिर आए । गोरखामा हिमानी ट्रष्टले गरेको कार्यक्रममा पूर्ववडामहारानी कोमल राज्यलक्ष्मी शाह प्रमूख अतिथि थिइन् भने पारस विशेष अतिथि थिए । सो क्रममा पारस–हिमानीको सम्बन्धमा सुधार आएको अनुमान सार्वजनिक भएका तस्बिरहरूबाट धेरैले लगाएका थिए । तर लगत्तै, माता सविता सरु आचार्य भनेर परिचय खुलेकी एक युवतीले हिमानीलाई पारससँगको सम्बन्धमा टाढा रहनका लागि सुझाव दिएकी थिइन् ।
निर्मलनिवास स्रोतले भन्यो,‘ धार्मिक विषयमा अधिक विश्वास गर्ने भएका कारण पारस–हिमानीको भौतिक दाम्पत्य जीवनचाहिँ नजिक हुन सकेको छैन, सम्बन्धचाहिँ अलिक नजिक भएको हो । सन्तानका कारण पनि सम्बन्धमा सुधार हुन थालेको हो ।’ तरपछि फेरी पारस मोडल सोनिका रोकायसँगको हिमचिममा विवादमा रहे । अहिले उनीहरुबीचपनि सम्बन्ध टाढिएको कुरा बजारमा छ । जे भएपछि नेपाली जनता कुनै बेलाको इतिहासको राष्ट्र प्रमुखको छोरा भएका नाताले पारस सुध्रिएको हेर्न चाहान्छन् । सामाजिक सञ्जालमा यही सद्भाव देखिन्छ । हामी त्यही सद्भावलाई सम्मान गर्दै सुध्रिएका पारस हेर्न चाहान्छौ ।
जेठ ३२ सम्म लकडाउन लम्बाउने सरकारको निर्णय, विमानस्थल असार १३ गतेसम्म बन्द
नर्भिक हस्पिटलमा कोरोना स,ङक्र,मित भन्ने अडियोको वास्तविकता, सन्देशलाई सेयर गरो